Bing (MSN) nsụgharị
Version 0.8.0 – Mmegide nke APIs
November 29, 2011 site na rịọ 65 Comments
Mgbe APIs ọgụ
Ọfọn n'ihu nke imecha obụp by Google Asụgharịa API ịkwụsị ọrụ, anyị bụ ndị mesịrị nwee ike ikpokọta ọhụrụ a tọhapụ. Nke a soro ogologo oge nsogbu e n'ihu ndị okenye version, tumadi n'ihi eziokwu ahụ Google kpebiri inwe na-agaghị emeli na ojiji n'ihu ha n'obi imecha ya nke mere gara aga na nsụgharị na-akwado arịrịọ iji anya ọhụrụ elu. Google mgbanwe nakwa triggered otu API ịgba ke Bing translation API, ebe ọ bụ na ndị ọrụ na-ịmafe maqbx chekwebe, nke overloaded na Transposh ike coded API isi n'ihi na Bing.
N'ebe a ka anyị nwere ihe siri ike version, o yiri ka ihe ọma nyak, ma ọ dịghị, anyị na-ama ụfọdụ ndị ọzọ ndị na na, N'ihi ya, anyị mesịrị kpebiri mee nsiondi otutu wijetị nkwado (na aha isiokwu nhọrọ oke, yippee!). Yiri nnọọ ogologo-atụ anya? ma ọ dịghị, nke a mere ka a isi ideghari anyị wijetị akụrụngwa dị. N'ezie rụọ ọrụ ya nke oma adi na-agbanwe otú css ama adian do, na otú wijetị amara gị ọkwa na sava nke mgbanwe asụsụ (ugbu a anyị zere a nweghị Post oku ihe nkesa). Ọ bụ ezie na-ede na anyị kechioma iji na-asụ ngọngọ n'elu PHP5.3 ka PHP5.2 incompatibility nke na a set ndị ọzọ na nsogbu nke ẹkenịmde anyị ufụn azụ ọzọ izu. Anyị na-ekele nke ọtụtụ ndị ọrụ na emewo elu anyị beta a na na nyeere anyị aka ịhụ na nsogbu e zoro n'okpuru n'ígwé nke koodu complexity.
Anyị na-ada ifet emi ịgbanwe usoro ubé, ma ọ bụrụ na ị na-egosipụta Google mgbasa ozi sitere na AdSense gị sụgharịa ibe, anyị ga- 1/1000 nke ohere maka ojiji nke anyị adsense koodu, ma ọ bụrụ Transposh-enyere gị igbanye a ego ha ga enweta nke $ 10K gị ga-azụ ihe anyị kọfị! N'ihi ya, ekele! Iji dokwuo anya ihe a bit, anyị adịghị ike ndị ọzọ na mgbasa ozi oghere gị na peeji nke, anyị ga-itinye ihe ọ bụla ma ọ bụ mgbasa ozi ịgbanwe gị okirikiri nhọrọ ukwuu, ma ọ bụrụ na ị dịghị mgbasa ozi, anyị na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-eche na a na-aju, ị pụrụ nanị hichapụ anyị ngwa mgbakwunye, igbu a juu na-akụ, na-na ụzọ gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a azụmahịa ikike, anyị na-adịghị ere ha, ma, ma ha Aga eleghị anya, na-eri ihe.
Ndị ọzọ na mgbanwe a version na-agụnye:
Gbakwunyere na Catalan na Hindi akwado Bing – na-ekwu maka onwe ya.
Dropdown wijetị mma css – n'ezie anya ka mma ugbu a,.
Nkwado nke Memcached – ma ọ bụrụ na APC ndị ọzọ opcode caches bụ nke ukwuu n'ihi na ị, Ugbu a, i nwere ike iji memcached ma nwee otutu fun.
Mma 404 na peeji nke njikwa (adịghị ike ọhụrụ njikọ na-abụghị ẹdude ibe) – nke pụtara google crawler ga hassle gị na saịtị na-erughị.
Idozi caching na rackspace cloudsites – ha x-Áhàámá arụnyere maka opcode dị n'ime oghere, ma na ọ dịghị onye ọrụ na ebe nchekwa, nke mere ka a anya ke logfiles – ugbu a ofu.
Ọtụtụ ndị ọzọ obere fixes – Anyị nwere ike ịgụ ndị, mana anyị anaghị ezuru mkpịsị aka.
Turkish Translation site Semih Yesilyurt.
Anyị na-atụ anya ka ị ụtọ a version, ka mgbe, na-eche gị kwuru, echiche, aro na-akpalikarị.
P.S – Nwara on WordPress 3.3 beta4, na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa, Software mmelite Akpado Na: Ajax, Bing (MSN) nsụgharị, bugfix, google ntụgharị, tọhapụ, wijetị, xcache